Shabakada BOI oo sheegtay in filimka Super 30 si dhex dhexaad ah ku furmay | Filimside
Home BOX OFFICE Shabakada BOI oo sheegtay in filimka Super 30 si dhex dhexaad ah...
Shabakada BOI oo sheegtay in filimka Super 30 si dhex dhexaad ah ku furmay
Superstar Hrithik Roshan filimkiisa Super 30 ayaa maanta tiyaatarada la saaray waxayna shabakada Boxoffice India (BOI) sheegtay in filimkan uu ku furmay si dhex dhexaad ah 20% ilaa 25% ayagoo xog walbo kasoo heleen dhamaan tiyaatarada gudaha Hindiya la saaray.
Super 30 bilaabashadiisa dhex dhexaadka ah waa mid wanaagsan marka loo eego fariinta filimkan oo ahayn mid ganacsi ama mada daalo dhameestiran leh oo fagta hore daawadayaasha ku qasbi karto inay tiyaatarka soo aadaan. Balse awooda Superstar Hrithik Roshan iyo mudo labo sano oo uu saaxada ka maqnaa in filimkiisa heerkan ku furmo ma ahan mid wanaagsan waa haddii dhanka awoodiisa HR laga eego sida BOI leedahay.
Filimka Super 30 wuxuu ka bilaabasho wanaagsan yahay Hrithik filimkiisii ugu dambeeyay Kaabil balse filimkaas maalinta kowaad waxaa siweyn kaga saameyn badnaa filimkii Raees. Waxaan dhihi karnaa Supe 30 bilaabashadiisa ma xumo sidoo kalena waxaa rajo laga qabaa maanta gelinka dambe inuu sare u kac sameeyo si mashruucan 10 Crore ganacsi ahaan u gaaro waana arin wanaagsan.
Waxaa xusid mudan in filimkan fariintiisa gobolka Bihar ku saabsan tahay haddana reer Bihar uma daawasho tagin badankooda sababtoo ah dadkan waxay xiiseeyaan aflaanta Action-ka iyo mada daalada dhameestiran leh, midaas badalkeeda Super 30 magaalooyinka waa weyn Hindiya ayuu si wanaagsan kaga furmay taasi oo ka dhigi doonto filim tiyaatarada Multiplex ku xooganaado ganacsi ahaan halka tiyaatarada Single Screens ganacsi ahaan ku liito.
Sida uu filimka Super 30 ku bilaawday awgeed waxay qabtaa shabakada Boxoffice India (BOI) in filimkan Sabti iyo Axad ganacsi adag sameyn doono sidoo kalena sedexdiisa maalmood ugu horeyso ganacsigiisa wanaagsanaan doono kadibna laga bilaabo Isniin ilaa Khamiis tijaabo culus mari doono.
Waxaan leenahay Hrithik Roshan nasiib wacan madaama Superstar-kan HIT dhameestiran baahi weyn u qabo inuu xiligaan helo.
Previous articleSheekada filimka Super 30: Hrithik wuxuu la yimid fariin qiiro badan isagana wuu soo rogaal celiyay
Next articleRasmi: Kabir Singh oo noqday filimka 2019 lacagaha ugu badan soo xareeyay bye bye Uri!